(၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကျင်းပ – Shan Parliament
ဒေသန္တရ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်ရေးကော်မတီ
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အမျိုးသမီး၊ ကလေးဆိုင်ရာမြှင့်တင်မှုကော်မတီ
တောင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမားနှင့် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ
Copyright by Shan State Parliament. Design by MM Cities (MMUA).
Home›အစည်းအဝေးများ›ပုံမှန်အစည်းအဝေး›(၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကျင်းပ
(၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကျင်းပ
တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ ၁၉
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက်၊ (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၁၀)နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော် သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၉)ဦး တို့ အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြု ကြောင်း ကြေညာပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၀)ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ(၁၉) ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ (၁၂၁) ဦး တက်ရောက်သဖြင့် (၈၆.၄၃)% ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် တတိယနေ့ အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခု မေးမြန်းရာ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ညီညီကျော် က “ရပ်စောက်မြို့နယ်ရှိ တိုးနီ၊ ဥတ္တံတား အ.မ.ကနှင့် ဆတ်သေ အ.ထ.က ကျောင်းတို့တွင် ခြံစည်း ရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းကလည်းကောင်း၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ထွန်း က “ကွမ်းလုံမြို့၊ ဝန်ထမ်း ရပ်ကွက်အတွင်း (၅.၈၀) ဧကခန့်ရှိသော စော်ဘွားကန်အား တူးဖော်ပြုပြင်ခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်က လည်းကောင်း၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလုံ က “မိုင်းကိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် လက်ထောက်ဆရာဝန် ပြန်လည်အစားထိုးခန့်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း ကလည်းကောင်း၊ ရွာငံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်က “ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေး အတွက် ဝါးဘိုးဝါးပျိုးပင်များ နေရာအနှံ့စိုက်ပျိုးနိုင်စေရန် ရှမ်းပြည်နယ် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မြို့နယ်များသို့ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်ကလည်းကောင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောင် က “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်အတွက် မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း ကလည်းကောင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်မောင်ပယ် က “ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် ဖြတ်သန်းသွားသည့် National Grid Line မှ (၂၊ ၅၊ ၁၀) မိုင်အတွင်းရှိ လွယ်မွန်း၊ လွယ်တော်နှင့် ထီဗွာကျေးရွာများတွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ ကလည်းကောင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအောင်ကျော်ဦး က “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းများ၌ နေ့စားလပေးပညာရေးဝန်ထမ်း ခန့်ထားနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက် ထားခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း ကလည်းကောင်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျောက်က “မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ တောညုကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာ(၇)ရွာမှ ဒေသခံပြည်သူများ ဖောက်လုပ်ထားသော မြေသားလမ်းအရှည်(၁၅၈၄၀)ပေအား ကျောက်ချော လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှလည်းကောင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်းက “ပြည်ထောင်စုနှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများမေးမြန်းလာပါက ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ချိတ်ဆက်ပေါင်း စပ်ညှိနှိုင်း၍ တိကျရှင်းလင်းစွာ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် ကလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ) ဦးညီလေးချမ်း က “ပင်းတယ၊ ရွာငံ၊ ကလော၊ ရပ်စောက်နှင့် တောင်ကြီးမြို့နယ်များရှိ ကားလမ်းမများပေါ်တွင် နွားများပိတ်ဆို့၍ ကြန့်ကြာမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် နွားပိုင်ရှင်များနှင့် နွားကျောင်းသားများ စည်းကမ်းရှိစေရန် မည့်သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း၊ “ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အစိုးရရုံးများမှ အငြိမ်းစားယူသွားသော ဝန်ထမ်းများကို အဆိုပါရုံးများတွင် ဆက်လက်တာဝန်ပေးထားခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် ကလည်းကောင်း အသီးသီး ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။
၎င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းခဲ့သော ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်းနှင့် ကလောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်တို့ကအသီးသီး အကြံပြုဆွေးနွေး ကြပြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ သီပေါ မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းစမ်းစမ်းအေး က ကော်မတီ၏ စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြချက်အား ဖတ်ကြားတင်ပြပါသည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်းက ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအားဖတ်ကြားကာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် အဆိုပါဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို အတည်ပြုကြောင်း ရှမ်းပြည် နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၆) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်း အဝေး (တတိယနေ့) ကို (၁၂:၀၅) အချိန်တွင် ပြီးစီးကြောင်းကြေညာပြီး (စတုတ္ထနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့)အစီအစဉ် လျာထားချက်
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့) အစီအစဉ် လျာထားချက် (၄.၉.၂၀၂၀)
ဦးဆွေသိန်း (မိုးမိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်-၂)
ဦးစိုင်းလင်းမြတ်(မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်- ၁)
Website Link များ
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် - pyithuhluttaw.gov.mm
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် - pyidaungsu.hluttaw.mm/
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး - president-office.gov.mm/en/
Copyrights © 2020 All Rights Reserved by Pyidaungsu Hluttaw.